Umama wengane eyabulwa unethemba lokuthi uzobeletha esephumile ejele | News24
Umama wengane eyabulwa unethemba lokuthi uzobeletha esephumile ejele
Cape Town - Owesilisa waseKapa osolwa ngokudlwengula nokubulala umfana onezinyanga ezingu-18 ubudala uzophinde achithe elinye isonto esezikhindini ngemuva kokuba sihlehlisiwe isicelo sebheyili ngoLwesithathu.
U-Ameer Peters‚ osolwa ngokubulala uJeremiah Ruiters ngoJuni 12‚ kanye no-Abigail Ruiters‚ osolwa ngokwephula umthetho wezingane ngokushiya kwakhe ingane inganakiwe, bebebukeka bekujabulela ukubona imindeni yabo eNkantolo kaMantshi eKapa.
Kodwa izihlobo ebezizokweseka uPeters bezingaphansi kwalezo ebezize ngoRuiters, okungamalungu omndeni, omakhelwane kanye nabangani ebebethi uPeters uzobulawa uma eke waphuma ejele waya eKensington lapho abehlala khona noRuiters.
OLUNYE UDABA: Umisiwe uthisha 'owaphoqa' abafundi ukuba balwe
URuiters ulindele ingane yakhe yokuqala noPeters ngoSepthemba njengoba ekhulelwe kanti abazali bakhe banethemba lokuthi uzobe esengaphandle ngebheyili uma sekufika isikhathi sokubeletha.
Umfowabo uJonathan‚ 25‚ uthe Ruiters uphatheke kahle kanti futhi useqala nokukhuluphala ejele.
“Uzizwa engcono ngoba uthola ukwesekwa umphakathi kanye nomndeni,” kusho uJonathan.
Ukulalelwa kwesicelo sebheyili kulindeleke kuqhubeke ngo-Agasti 25, kubika iSowetan Live.